Ikhamera efihliwe ye-Pocket pen Video (SPY009) | Izixazululo ze-OMG
Ifihliwe i-Spy efihlekile ye-Pocket Pen yekhamera yevidiyo (SPY009)
Pocket Video Pen Camera - HD 720P Mini Hidden Camera Spy Pen, Body Camera with Audio and Voice Recorder, plus 5 Hour Time Record for Police, Investigators Private, and Undercover Work
I-Well Designed Spy Camera Ikhamera: Kubukeka sengathi ipeni lapho ulifaka ephaketheni lakho, kepha akekho ozokwazi ukuthi ikhamera. Ikhamera yomzimba ephathekayo encane ilingana kahle esandleni sakho, ephaketheni, noma ekhabetheni. Incane ngokwanele ukufihla noma ikuphi, futhi yenzelwe ngqo ukuqoshwa kwamaphoyisa noma uphenyo olufihliwe.
Ividiyo Ephakeme Nekhwalithi Yomsindo: Ikhamera yevidiyo yepokhethi irekhoda izinga eliphezulu le-1280 * amavidiyo we-720P. Ngemikrofoni eyakhelwe ngaphakathi, ibuye isebenze kahle kakhulu njengomsakazo wezwi. Ngesikhathi sokurekhoda okuqhubekayo, igcina amafayela evidiyo kumakhamera amaminithi angu-5, futhi kukhona isitembu sosuku efonini ngalinye njengendawo yokukhomba lapho kubukeza amafayela.
Isikhathi sokuqopha eside se-Ultra: Ngethrikhi ye-720mAh evuselelekayo eyakhelwe ngaphakathi, ipeni yekhamera ephathekayo ephathekayo isekela ukuqopha kuze kufike kumahora we-5 ngemuva kokukhokhiswa okugcwele. Ibuye isekele ukurekhoda nokushaja ngesikhathi esifanayo, ngakho ungakwazi ukunamathisela ibhange lamandla wangaphandle noma ukushaja i-adapter ukushaja ngenkathi urekhoda.
Kulula kakhulu ukusebenzisa: Vele uchofoze inkinobho ukuze uqale futhi uyeke ukurekhoda. Lona ipulaki leplaythi yokudlala ehamba phambili emakethe. Vele uxhume ipeni le-spy kukhompyutheni yakho ngekhebula le-USB elifakiwe, futhi ubuyekeze isithombe sakho. Kungcono kakhulu ukusebenzisa umsebenzisi ukuthi ingane ingayisebenzisa.
Ifihliwe i-Spy efihlekile ye-Pocket Pen yekhamera yevidiyo (SPY009) igcine ukuguqulwa: Okthoba 9th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-6056 Ukubuka kwe-7 Namuhla